चर्चित कलाकार सन्तोष पन्तको हिजो आजका कुरामा पत्निको भूमिकामा देखिएर चर्चा कमाएकी बरिष्ठ कलाकार रमाको भब्य घरमा पुग्दा देखियो यस्तो माहोल – Gazabkonews
चर्चित कलाकार सन्तोष पन्तको हिजो आजका कुरामा पत्निको भूमिकामा देखिएर चर्चा कमाएकी बरिष्ठ कलाकार रमाको भब्य घरमा पुग्दा देखियो यस्तो माहोल
चर्चित कलाकार सन्तोष पन्तको हिजो आजका कुरामा पत्निको भूमिकामा देखिएर चर्चा कमाएकी बरिष्ठ कलाकार रमा थपलियाको भब्य घरमा पुग्दा देखियो यस्तो रमाइलो माहोल, काठमाडौँमा रहेको भब्य बंगलामा उनको घर भित्र नै छ भगवान् श्रीकृष्णको मन्दिर, छुच्चि बुढीको भूमिकामा अभिनय गरेकी रमा वास्तविक जीवनमा छिन् निकै मिलनसार र सहयोगी, सन्तोष पन्तलाई अहिले यसरी सम्झिन्छिन्, भन्छिन् उहाँ नभएको भए म आज यो ठाउँमा हुने थिइन । भिडियोमा हेर्नुहोस् उनको घरमा नै गएर गरिएको होम भिजिटमा देखिए यस्ता अपत्यारिला रहस्यहरु
कृषकलाई धानको बीउ : जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले कृषकहरुलाई उन्नत जातको धान उत्पादन गर्न बीउ बितरण शुरु गरेको छ । बिहिबारदेखि पहिलो चरणमा वडा नम्बर ६ बाट बीउ बितरण शुरु गरिएको छ । अन्य वडामा एक हप्ता भित्र झण्डै चौध मेट्रिकटन बीउ बितरण गरीसक्ने नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रमुख नीतु खनालले बताउनु भयो । गत वर्ष पनि वर्षायाम सँगै धानको बीउ राख्ने बेलामा नगरपालिकाले उन्नत जातको धानको बीउ बितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले धानबाली नगरको प्रमुख बाली भएकाले धान उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र नगरपालिकालाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन बीउ बितरण गरेको बताउनुभयो ।गत वर्ष कृषकलाई उन्नत जातको धानको बीउ बितरण गर्दा नगरमा बीस प्रतिशत भन्दा बढी धान उत्पादन बढेको र धानको उत्पादन बढाउन यस पटक पनि नगरपालिकाले बीउको लागि छुट्टै बजेट व्यावस्थापन गरेको नगरप्रमुख राईले बताउनुभयो । बीउमा २५ प्रतिशत कृषक र ७५ प्रतिशत नगरपालिकाको योगदान रेहको छ ।
तितो सत्य, जय भोले, छक्का पञ्जा जस्ता चर्चित फिल्म र टेलिफिल्ममा जब्बर महिलाको भूमिकामा खेलेकी वरिष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी गिरि हुन् करोडौँ सम्पत्तिकी मालिक्निी, फिल्ममा कडा स्वभावमा देखिए पनि वास्तविक जीवनमा छिन् निकै नम्र र कोमल स्वभावकी, काठमाडौँमा नै भब्य महल ठडाएकी लक्ष्मी हुन् भगवान् शिवको कडा भक्त, उनको घर भित्रै छ शिवको भब्य मन्दिर, भब्य घरभित्र स्विमिगं पुल समेत रहेछ लक्ष्मीको, लक्ष्मीको घरमा पुग्दा देखियो कहिल्यै नदेखिएको माहोल, हेर्नुहोस् यो विशेष भिडियो
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दिएको प्राथमिकताको प्रतिफल देखिन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणानुसार गत फागुन मसान्तसम्म मुलुकभर बिजुलीको कूल जडित क्षमता एक हजार ४५८ मेगावाट पुगेको छ ।
यो गत वर्षका तुलनामा ४.१ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट घण्टा तथा झण्डै ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।
त्यसैगरी २०७७ फागुनसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कालोपत्रे सडक १५ हजार ९७४ किलोमिटर, खण्डास्मित आठ हजार ५८२ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार ९७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।यस्तै सबै सरकारी विद्युतीय सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा पु¥याउन नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा उत्साहजनक प्रगति हासिल भएको छ । काठमाडौँको ऐतिहासिक धरोहरका धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूललगायत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बुढेसकालमा विबाह चर्चित कलाकार मिथिला शर्मालाई के भयो यस्तो ? किन रुँदै हिँड्नुपर्यो ?
चर्चित नायक पल शाहकी प्रेमीका भनिएकी चर्चित मोडल गरिमा शर्माले कसिन् सुटुक्क लगनगाँठो, गरिमाले पललाई नै थाहा नदिइ विबाह गर्नुको कारण यस्तो रहेछ, के पैसाका लागि आँफुभन्दा निकै जेठा युवकसँग विबाह गरेकी हुन् गरिमाले ? अब पललाई के जवाफ देलिन् ?
गत वैशाखमै तिङ्कर सर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी अझै व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुमै छ । विगतमा स्थानीयवासीको बसाइँसराइ (कुञ्चा) सर्नुभन्दा अगावै छाङ्गरुबाट तिङ्कर सर्दै आएका प्रहरी यस वर्ष भने जेठ दोस्रो सातासम्म छाङ्गरुमै बसेको छ । व्यासका बासिन्दा गत वैशाख पहिलो साता सदरमुकाम खलङ्गाबाट कुञ्चा सरेका थिए । सदरमुकाम खलङ्गामा गर्मी बढेसँगै स्थानीयवासीको कुञ्चा छाङ्गरु र तिङ्कर उक्लिएका थियो । नेपाल प्रहरी यस वर्ष पहिलोपटक छाङ्गरुमै बाह्रैमास बसे पनि छाङ्गरुबाट तिङ्कर उक्लिन सकेको छैन ।
गत मङ्सिरमा छायालेक तिङ्कर प्र हरी चौ की व्यासको छाङ्गरुमा झरेको थियो । ति ङ्करमा बढी हिमपात हुने भएपछि स शस्त्र प्रह रीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली छाङ्गरु झरेको हो । अहिले तिङ्करमा स्थानीयवासी सरिसके तर प्रहरीमाथि उक्लिएका छैनन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट छाङ्गरुबाट नेपाल प्रहरी यसै साता तिङ्कर उक्लिने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । “पहिले नै सर्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि तयारीमै ढिलाइ भइरहेको छ ।” प्रहरीका लागि गत कात्तिकमा खाद्यान्न ढुवानी गरिएको थियो । त्यसयता त्यो क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी भएको छैन । कात्तिकमा प्रदेश सरकारले खाद्य संस्थानको चामल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरेको हो । कात्तिकयता अहिलेसम्म सरकारले पनि खाद्यान्न ढुवानीमा चासो दिएको छैन ।
नेपालतिरको बाटो अझै पनि हिँड्डुल गर्न लायकको छैन । छाङ्गरुको सीतापुलमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा १० जना खटाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ । अहिले पनि हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्नलगायत जनशक्ति पठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्ट बताउनुहुन्छ ।छाङ्गरुमा नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक भवन निर्माण हुने त्रिदेशीय सीमा नजीकै व्यास–१ छाङ्गरुमा नेपाल प्रहरीको पनि अत्याधुनिक सुविधासहितको भवन निर्माण हुने भएको छ । लामो समयदेखि जीर्ण भवनमा बस्दै आएका सीतापुल प्रहरीका लागि नयाँ अत्याधुनिक भवन निर्माण हुने भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा आठकोठे सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुन लागेको नायब उपरीक्षक भट्टले बताउनुभयो । “भवनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले भन्नुभयो, “छिट्टै निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गर्ला ।”भवन निर्माणपछि जीर्ण भवनमा ड्युटी गर्दै आएका प्रहरीलाई राहत हुनेछ । यस वर्ष सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण शुरु भएपछि प्रहरीले पनि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सीतापुलमा निर्माण हुने भवनका लागि कूल रु दुई करोड तीन लाख लागतमा रोयल एलबी एन्ड एबी जेभी धनगढीसँग सम्झौता भएको छ । भवन निर्माणका लागि गत वैशाख १२ गते सम्झौता भइसकेको निर्माण व्यवसायी लालबहादुर बमले बताउनुभयो । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण कार्य सक्नुपर्नेछ ।
भवन निर्माणमा झण्डै ४० घनमिटर काठको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीको भवनको जस्तै डिजाइनमा नेपाल प्रहरीको भवन निर्माण हुन लागेको हो । भवनको भित्र ढुङ्गाको पर्खाल हुनेछ भने बाहिर सबै काठको प्रयोग हुने छ । निर्माण व्यवसायी बमले भन्नुभयो, “भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।”भवन निर्माणमा बढी काठको प्रयोग हुने भएपछि अनुमतिका लागि अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले पनि माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने भएका कारण अनुमति प्राप्त भएको छैन । काठको अनुमति आउने बित्तिकै निर्माण कार्य अघि बढाइने गरी तयारी थालिएको निर्माण व्यवसायी बम बताउनुहुन्छ ।